धनगढीकी दुलही टिकटकमा भाइरल, को हुन् त यी हँसिली चेली ? पूरा पढ्नुहोला ; – live 60media
धनगढीकी दुलही टिकटकमा भाइरल, को हुन् त यी हँसिली चेली ? पूरा पढ्नुहोला ;
धनगढीः ‘पर्सी आइहाल्न्या हुँ खिरपुरी बनाइराख्नु। अचार पनि, धेरै खान्या हुँ। हिजो कम खाँ हुँ नि मैले ! धेरै खान्या हुँ। नरुनु।’ दुलहीले कारबाट आमालाई सम्झाउँदै भनेको यो भिडियो अहिले निकै चर्चामा आएको छ।‘विचार गरेस् है आफ्नो। आफ्नो शरीर स्वस्थ एपछि मात्र सबै चिज हुन्छ है। ख्याल राख्नु।’ सोही भिडियोमा दुलहीको गाला सुम्सुम्याउँदै आमाले भनेको देख्न सकिन्छ।
टिकटक र फेसबुकमा भाइरल भइरहेको यो भिडियो कसको हो ? भन्ने कुरा अहिले निकै चासोको विषय बनेको छ। सारामल्ल ठकुरीको टिकटक एकाउन्टबाट सार्वजनिक भएको यो भिडियो भाइरल भइरहेकै बेला फेरी अर्को भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ। जुन भिडियोमा उनी पूर्व वाचा अनुसार माइतीघर आएको देख्न सकिन्छ भने आमाको हातबाट खिरपुरी र अचार पनि खाएकी छन्।
उनी मुडभरी शान्तिको नामबाट टिकटक चलाउँदै आएकी छन्। दिनेश खबरबाट साभार
← टिकटकमा भाइरल ७० बर्षका श्रीमान २० बर्षकि श्रीमती, झल्कीयो सुमधुर प्रेम, आयो सिरियलमा अफर (भिडियो सहित)
स्ट्रेच मार्क्स अर्थात सेतो धर्साबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस् →